Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitsarana ady amin’ny fanjakana : Nandresy ireo sefo ZAP noroahina noho ny fifidianana
Tamin’ny fifidianana izay ho solombavambahoaka farany teo ny faha 27 may 2019 iny dia isan’ny nahazo tsindry hazo lena ireo sefo ZAP tany amin’ny distrikan’i Sakaraha sy Ambovombe Androy.
Miisa 20 mahery ny fitambaran’izy ireo no nahazo fanesorana tamin’ny asany na nafindra toerana noho ny tsy faneken’izy ireo nanaiky ny baikon’ny DRENETP sy ny sefo Cisco na ireo talen’ny fampianarana any amin’ny faritra misy azy avy. Na ny tao Atsimo Andrefana na ny tany Anosy dia hita ny fanaparampahefana sy ny fanaovana ramatahora tamin’ireo mpampianatra ireo.
Notsaraina tao amin’ny fitsarana miady amin’ny fanjakana ao Toliara izy ireo omaly alatsinainy faha 24 jona 2019. Nahazo fandresena avokoa izy rehetra ireo. Noho izany dia miverina amin’ny asany teo aloha ireo sefo ZAP ireo araka ny didy nivoaka io.
Na izany aza dia hita fa tsy fanekena hangala-bato sy hanao propagandy hoan’ny kandida no nahatonga izao fanesorana azy ireo. Vita ny fifidianana ary nisy ny hala-bato tamin’ireo toerana ireo. Ny HCC no tompon-teny farany ka hohitan-tsika ny fitsarana izany satria efa nandefa fitoriana any amin’ity andrimpanjakana ity koa izy ireo.